အကယ်ဒမီ ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ နှစ်သစ်အလှူ | Duwun
ခိုင်သင်းကြည်က သူမရဲ့ ပထမဆုံးအကယ်ဒမီ ရွှေစင်ရုပ်တုက ရွှေကြယ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ဦး အလှူအဖြစ် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးမှာ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်. ဒုတိယမြောက် ရွှေစင်ရုပ်တု ကိုတော့ လှူပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်.
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီခိုင်သင်းကြည်က သူ့ရဲ့ နှစ်ဦး အလှူအဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ် အကယ်ဒမီ ရရှိခဲ့တဲ့ ရွှေကြယ်ကို ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးမှာ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့က သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်. ဒီအလှူလေးအတွက် ပီတိစကားကိုလည်း ခိုင်သင်းကြည်က အခုလို ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်.
'ပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်.ရွှေကြယ်ကပ်လှူပူဇော်. ဒီနေ့မှနှစ်သစ်အလှူလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ရှင် မနေ့ကခရီးကအပြန်လမ်းမှာကားတွေပိတ်ပြီးနောက်ကျသွားလို့ဘုရားလည်းမသွားလိုက်ရ,သုသုလေးရဲ့မင်္ဂလာပွဲလဲမသွားလိုက်ရဘူး ဒီအကယ်ဒမီရွှေကြယ်လေးကိုနှစ်သစ်မှာလှူဖို့အတွက်ရက်စွဲလေးထိုးထားတာပါ?(ဒီကြယ်ကပထမဦးဆုံးရတဲ့ကြယ်ပါ ဒုတိယရတဲ့ကြယ်ကတော့အောင်ဇဗ္ဗူဘုန်းကြီးကျောင်းကဘုရားမှာလှူထားပါတယ်ရှင့်)အဲ့ဒီ့တုန်းကပရိသတ်တွေအရမ်းရစေချင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြ,အားပေးခဲ့ကြလို့ရခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်,ဒါကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အလှူလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်ရှင့် ချစ် ပရိတ်သတ် များကျန်းမာ,ချမ်းသာပြီးပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင့်''ဆိုပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ ၅၅ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်.
ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ ပထမဆုံး အကယ်ဒမီ ရွှေစင်ရုပ်တုဟာ ဆိုရင်တော့ ''စုန်းပြူး'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ဆု ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီ ရွှေစင်ရုပ်တု ကိုတော့ '' ကောင်းကျိုးကိုယ်၌ တည်စေမင်း'' ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင် ဆုကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီ ခိုင်သင်းကြည်ကတော့ သူ့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေး စံထိပ်ထားဦးqကိုတော့ လက်ရှိမှာ စာကိုပဲ အဓိက လုပ်စေချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သမီးလေးကိုလည်း လိမ္မာရေးခြားရှိအောင် သွန်သင်ဆုံးမဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း Duwun Media ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။